२०७६ असार ५ गते बिहीबारको राशिफल - SangaloKhabar
वि.सं. २०७६ असार ५। बिहीबार। इ.स. २०१९ जुन २०। ने.सं. ११३९ तछलागा। आषाढ कृष्णपक्ष। तृतीया, १६:०१ उप्रान्त चतुर्थी ।
स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा थकान महसुस हुनेछ। अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मफल हातपार्न सफल भइनेछ। तर, धैर्य एवं लगनशीलताले मात्र उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला। प्रयत्नले मात्र काम पूर्ण नहुन सक्छ।
परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दु:ख पाइनेछ। विश्वासपात्रबाट धोका पाइने समय छ, सजग रहनुहोला। निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन्। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्ला। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। घरेलु समस्याले अलमल्याउन सक्छ।
खर्चिलो व्यवहारले समस्या निम्त्याउन सक्छ। फाइदा नहुने काममा अलमलिनुपर्ला। समयमा सजगता नअपनाउँदा शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन्। कामको सन्दर्भमा केही वादविवाद हुन सक्छ। तापनि बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्छ। विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। विवादमा अघि नसर्नुहोला।
परिवेश रमाइलो रहनेछ तर परिस्थितिले समस्या निम्त्याउन सक्छ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। लोकाचारका पछि लाग्दा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पार्न सकिनेछ। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा हुनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०५, २०७६ समय: ७:३४:१०